Thursday September 17, 2020 - 13:42:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in dablay hubaysan ay xasuuq arxan darra ah ugeysteen macallimiin dugsi Qur'aan.
sawirka qaar kamid ah Macallimiinta la xasuuqay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan ay xalay weerareen deegaanka Boos Muluq oo hoos taga degmada Raage Ceelle waxayna halkaas ku dilaay 6 qof oo dhammaantood ahaa Macalimiin dugsi Qur'aan.
Mid kamida dadka deegaanka ayaa SomaliMeMo u sheegay in xilligii macallimiinta ladilayay ay Subac ku jireen, mid kamida macallimiinta oo dhaawac culus uu kasoo gaaray weerarka ayaa maanta geeriyooday.
Dablayda weerarka geysatay ayaa qaab beeleed u abaabulnaa wuxuuna falkooda foosha xun uu daba socdaa colaad dad badan ay ku dhinteen oo sanadkaan gudihiisa beelo walaala ah ku dhaxmartay deegaannada dhaca xeebta Sh/dhexe.
Dilalka loo geysto dadka waxtarka u leh bulshada sida culimaa'udiinka iyo macallimiinta Qur'aanka ayaa aad ugu badan deegaannada ay xoogga ku haystaan ciidamada shisheeye halkaas oo laga huriyo aanooyinka qabiillada waana arrin qeyb ka ah waxa loo yaqaan qeybi oo xukun.